Manomboka mivarotra Apple Watch | Vaovao IPhone
Mieritreritra ny hahazo vokatra Apple vaovao? Raha izany dia mandosà any amin'ny Apple Store na an-tserasera na ara-batana, ao anatin'ny Fotoana izay manahirana indrindra ny ahazoana ny fanomezana tonga lafatra avy amin'ireo lehilahy avy any Cupertino. Ary io dia rehefa Krismasy dia misy vokatra marobe izay tsy manana stock intsony, tsy lazaina intsony ireo vaovao AirPods, ireo headphones vaovao tsy misy tariby izay asa tsy azo tanterahina amin'ity Krismasy ity ... Io Saika tsy hita izany ao amin'ny Apple Store ara-batana, mainka fa tsy hahita azy ireo ao amin'ny Apple Store an-tserasera raha mieritreritra ny hitondra azy ireo alohan'ny Krismasy ianao.
Ary io dia fantatr'i Apple ny fomba anaovany azy tsara amin'ny famoronana izany natrehin'ireo ohatrinona no mahatonga antsika hividy vokatra marika. Mazava ho azy fa misy foana ny safidy hafa ... Azonao atao ny mahazo azy ireo any amin'ny magazay teknolojia hafa, na mividy izany amin'ny olona tsirairay. Mitandrema amin'ireto farany satria amin'ny farany dia loteria ny zava-drehetra ... Tsara kokoa ny mamaky ny faritra amin'ireo vokatra voaverina (nohavaozina) an'ny Apple izay ahafahanao mahazo avy amin'ny Mac voaverina amin'ny iPhone naverina amin'ny laoniny. Ny farany, ny Apple Watch. SASANY Apple Watch nohavaozina vitantsika mividy mivantana ao amin'ny Apple Store miaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny kalitaon'ny Apple.
Amin'izao fotoana izao ny tolotra Apple Watch nohamboarina (na nohavaozina) dia misy ao amin'ny Fivarotana Apple Apple, Apple Watch sasany azontsika amin'ny 229 dolara amerikana. Tsy isalasalana fa tolotra tsara satria manana ny fanamarinana Apple ireo fitaovana ireo, izany hoe azonao antoka fa tsy hanana olana amin'ny Apple Watch ianao. Izy rehetra dia samy nanana 100 hatramin'ny $ XNUMX Ka dia hitahiry zavatra ianao.
Apple Watch Series 1 Sport 38mm by $229
Apple Watch Series 1 Sport 42mm by $249
Apple Watch Series 2 42mm amin'ny vy by $509
Fantatrao, raha mipetraka any Etazonia ianao ary mieritreritra ny hahazo Apple Watch ianao aza adino ity tolotra ity. eFA Warranty 1 taona, toy ny vokatra Apple rehetra novidinao tany Etazonia, ary azonao atao foana izany manitatra io vanim-potoana io amin'ny alàlan'ny fahazoana Apple Care. Apple dia mitaky ny vokatra rehetra nohavaozina amin'ny fizotrany mba hahazoana antoka fa mivory voahidy fenitra manara-penitra, Ka tsy tokony hanana olana amin'ny vokatra Apple nohavaozina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Manomboka mivarotra Apple Watch nohavaozina i Apple